Ufisa ukushicilelwa umbhali wase Willowfontein | News24
Ufisa ukushicilelwa umbhali wase Willowfontein
PHOTO: nokuthula khanyileUMnuz Bhekisisa Khanyile.
UMBHALI wase Willowfontein uthi udinga abazomhlangabeza bamcushise ukuze umsebenzi wakhe ugcine usushicileliwe.
UMnuz Bhekisisa Khanyile (49) uthi uqale ukubhala izindaba ezimfishane, izinkondlo, amahubo, iziphicaphicwane, kanye nezaga ngokuseqinisweni ngonyaka ka 1990.
“Ngeminyaka yawo 1980 ngifunda amabanga aphansi bese ngivele ngizibona ukuthi nginalo ithalente kodwa bekungakabi seqinisweni ngoba bengisemncane.”
UKhanyile uthi yize ezazi ukuthi unesiphiwo sokucikoza ngamagama kodwa ukungatholi abantu abazomcathulisa kulomkhakha kumqeda amandla.
“Muningi umsebenzi esengiwubhalile oduve ekhaya ngisho nezaga abantu abaningi abathi uma bezifunda bathole ukuthi ziyanemba nginazo. Okubuhlungu ukuthi akubhaleki ngokushesha uma umsebenzi wakho ungashicilelwa futhi lokho kugcina kuqeda amandla nothando.” Lombhali uthe yize enesakhe isitayela kuyenzeka ahlwithe esababhali asebedumile kodwa ebhala ngomuzwa wakhe.
“Abekho ababhali engingathi ngibukela kubona kodwa kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ngihlwithe isitayela kodwa ngingaphelelwa umuzwa wami ngendlela engiloba ngayo nami njengombhali.”
Lombhali uthe uyafisa ukuthi ngaphandle nje kokuthi umsebenzi wakhe ugcine ushicilelwe kodwa uphinde uzwakale nasemisakazweni.
“Ngiyafisa ukuthi izindaba zami ezimfushane ziphendulwe iziqeshana ezizodlalwa emisakazweni okanye zigcine sezifundwa nasezikoleni njengoba kwenziwa nakwezababhali asebazakhela idumela.”
Uthi isikhathi esiningi imibhalo yakhe uyisusela ezintweni asuke ezibona zenzeka.
“Kunendaba emfishane ethi ‘Usuku oluhle’ ekhuluma ngokuthi ungamoni omunye umuntu. Igqugquzela ukuthi abantu baphathane kahle futhi baqikelele ekutheni abaphathani kabi ngaso sonke isikhathi.”
Umbhali uMnuz Zakhele Hlatshwayo echaza ngobuciko bukaKhanyile uthe ubona ithalente eliyisimanga kuyena.
“Unethalente eliyisimanga into ayidingayo nje abantu abazomhlangabeza ngokomsebenzi wakhe. Uzithobile futhi izinto azibhalayo zincike kakhulu ebhayibhelini. Okuhle ngaye ukuthi yize kade aqala ukubhala unamandla okuthi angeke alahle ithawula umsebenzi wakhe ungakashicilelwa.”
Eqhuba uHlatshwayo uthe uyafisa ukuthi iphupho likaKhanyile lokuthi umsebenzi wakhe ugcine ushicilelwe lifezeke. “Singajabula uma kungaqhamuka abezinkampani ezishicilela izincwadi bakwazi ukumcathulisa. Sengike ngawufunda umsebenzi wakhe muhle kakhulu kanti nabanye abantu bangafunda okuningi kuwo.”
Uma ungakwazi ukusiza uMnuz Khanyile ungaxhumana naye ku 084 784 7376.